Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola laseBrazil I-Neymar Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Neymar Biography yethu yeendaba ifakwa ngokuphelele emndabeni wakhe wobuntwana, impilo yakuqala, abazali, amaqiniso womndeni, umfazi, izingane, impilo yomuntu uqobo kanye nendlela yokuphila. Iqiniso liwukuthi, sikunikeza ukuhlaziywa ngokuphelele kweNdaba Yempilo Yakhe, kusukela ezinsukwini zokuqala zikaNeymar kuya lapho aphumelela khona.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe okubheka amehlo kanye nochungechunge lwamagama akhethwe iBonon d'Or. Noma kunjalo, abalandeli abambalwa kuphela abazi okuningi mayelana ne-Bio ye-Neymar Jr ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Indaba Yobuntwana YeNeymar:
UNeymar da Silva Santos Júnior wazalelwa ku-5th kaFebhuwari 1992 eMogi das Cruzes, eSão Paulo, eBrazil. Uzelwe nguyise, uNeymar Santos Sr (owayengumdlali webhola lezinyawo) kanye nonina uNadine Santos.
Ngesikhathi eseneminyaka eyisine ubudala, uNeymar wasindisa ngokuyisimangaliso ukulimala kwezimoto ezibulalayo. Ukulimala kwezimoto ezibulalayo kwabangelwa imoto ezayo eyayingena emgwaqeni omkhulu emotweni yomndeni njengoba behamba endleleni yokuvakashela izihlobo.
Ngenhlanhla, u-Baby Neymar owayegcinwe esihlalweni somntwana esihlalweni sangasemuva semoto wasinda kule ngozi wabe esekhishwa ngaphandle.
I-Neymar - Iminyaka Ekhulayo:
Uma umuntu ebheka i-football geeni namuhla, kungaba nzima ukukholelwa ukuthi wayengakaze aphile kahle. Eqinisweni, umndeni wakhe wawunamahloni ngesikhathi sokuzalwa kwakhe. Uyise, uNeymar Sr kwadingeka asebenze imisebenzi eminingi ukuze aqhubeke nomndeni wakhe. Kodwa-ke, bakwazi ukugubha usuku lokuqala lokuzalwa lukaNeymar.
Ngenxa yalokho, lapho uNeymar eneminyaka yobudala (efanekiselwa ngezansi), wabhaliswa esikoleni esivumelana ne-ilk yakhe. Emuva ekhaya ngemuva kwesikole, umndeni wakhe wawungekho ugesi ngenxa yokuthi babengenakukwazi ukuwukhokhela, intuthuko eyenza uNeymar nodadewabo omncane babeke amakhandlela njengendlela kuphela yokukhanyisa ukutadisha.
Ngesikhathi uNeymar Sr ezama ukuzondla umndeni wakhe, indodana yakhe u-Neymar Jr wathola futhi waqala ukuthuthukisa ithalenta lakhe ebhola. Ngokungafani nezinye izigqoko zabadlali bebhola lezinyawo, umsebenzi we-Neymar ebhola webhola lezinyawo waduka enkundleni yebhola basketball hhayi emkhakheni wokudlala.
Wafunda ukudlala Futsal futhi uzinikezele emdlalweni wangaphakathi wendawo ovezwa ngokukhahlela ibhola lebhola elinzima elingalutholi okuningi. Ngenxa yokuzikhethela kanye nokulinganiselwa okwenziwa ngumdlalo odlalwa enkantolo yebhasiksikidi, uNeymar wakwazi ukufunda nokuthuthukisa amakhono amnandi awabonisayo namuhla emasimini ebhola.
Ngaso leso sikhathi, wathandwa phakathi kontanga emigwaqeni wathatha amakhono akhe. U-Neymar Sr. uyavuma amakhono indodana yakhe ayenaye futhi ngezinye izikhathi wathatha isikhathi esimisweni sakhe esimatasa sokuhamba u-Neymar omncane phansi endleleni yokuqeqeshwa.
Mayelana Nabazali bakaNeymar:
Kwabaningi, i-genetics of Neymar I-Jr abazali kufaka ukulingana okuphelele kumntwana omkhulu wendodana. Beyizicucu ezimbili ezihle zezinto eziphilayo eziye zaveza uhlobo lwebhola elingavamile.
U-Neymar uvame ukuthatha izinyembezi ezimbili kubo ngaphambi kwemidlalo yakhe ye-futsal nemigwaqo yomgwaqo. Ukuthandana kwakungapheli isikhathi futhi kwakungekho umkhawulo, kwaqhubeka ngisho ngenkathi uNeymar eseSantos iqembu lakhe lokuqala lochwepheshe (okufanekiselwa ngezansi).
Ngemva kokumanga okunjalo, abazali bakhe babevame ukumtshela;
... ''Mhlawumbe, isiphetho kanye nokuphela kwakho bekukunike abazali abangcono kunathi. Kodwa akukho okungasinika indodana engcono kunawe. Siyakuthanda ndodana, wena ungcono kakhulu. Manje. Hamba uphinde uziqede konke! "...
I-Neymar Biography - Indima Esiqeshini Somqeqeshi Wekhanda weSantos:
Ngesikhathi uNeymar eseseSantos, wadlala indima ebalulekile esaholela esikhwameni somqeqeshi weqembu, uDorival Junior. Lesi sigameko saqala ngesikhathi uDorival Junior evimbela uNeymar ukuthi athathe isigwebo sokukhahlela. Ukukhahlela kwanikezwa omunye umdlali ogama lakhe linguMarcel, intuthuko eyenza uNeymar uthukuthele. Ngesikhathi ebuyela ebhentshini, washaya inselelo isinqumo somqeqeshi kangangokuthi kwakudingeka avinjelwe ngumuntu ohamba phambili.
Kodwa uNeymar waxolisa ngokuziphatha kwakhe okungahambi kahle kodwa umqeqeshi wekhanda wakhetha ukumjezisa ngokuphuma ngaphandle kweqembu lakhe ngesikhathi kuhlolwa izibalo ze-classico ngokumelene nabaseKorinte.
Ibhodi labaqondisi beqembu elithandekayo kuNeymar abazange bajabule ngesinqumo sikaDorival Junior futhi banquma ukumkhanda. Ukuxoshwa kukaDorival kwafakazela ukuthi uNeymar wayengeyena umdlali obalulekile kuphela weqembu kodwa wayebhekwa njengomuntu okhethiwe ongasindisa ibhola laseBrazil.
"I-Toiss" yi-4 abangane bangapheli bakaNeymar abaye baba usizo ekuqiniseni umsebenzi wakhe wezemidlalo. Benza imisebenzi eyisisekelo yomngane wabo odumile, kubandakanya ukucubungula izicelo zeJersey nama-autographs abashiya uNeymar egxile emgodini.
Isizathu Esiphezulu Sesidlaliso:
U-Neymar wabizwa ngegama elithi 'Lord of the Night' ngabalingani beqembu lakhe egumbini lokugqoka likaBarça ngenxa yokuthi unesifiso sokujabulela ukuphila, ikakhulukazi uma kuziwa ngobusuku obuphuma ne "The Toiss".
Inkanyezi yaseBrazil ithanda isidlaliso esiyisihloko seBatman. Wadlala eqembu le-'Halloween 'lika-2015 lapho ebonakala egqoke emasikini aseBatman enezinhlungu zikaDracula.
Nakuba abanye bathatha izintombi zabo kumaqembu, uNeymar wenza okuphambene nalokhu. Uthatha umama wakhe. Ngokusho kwakhe,
"Umama ugijima umndeni. Unguhlobo lomuntu, ngaphandle kwakhe, sizolahleka. Usekela. Ngisondelene ngempela nomama lapho izingane zakithi zasezikolishi futhi ubaba wayehamba kakhulu. "
Mayelana Nomfazi KaNeymar:
Ngesikhathi esemncane ka-19, uNeymar waba nenkinga nentombazane yakhe yasebuntwaneni uCarolina Dantas eyayikhulelwe.
Wabeletha indodana eyayiqamba ngokuthi 'Davvi Luca'. U-Neymar wayemi naye konke ngokukhulelwa kwakhe futhi wahlala naye ngemuva kwalokho. Nakuba abaningi bakholwa ukuthi ukuzalwa kukaDavid Luca kwakha ubuhlobo babo, bambalwa abambona ukuthi uNeymar uhlale enenhliziyo enothando futhi enakekelayo.
Mayelana neNdodana kaNeymar:
Umdlali webhola waseBrazil ubelokhu eyithanda indodana yakhe selokhu yazalwa. Ingxenye ebalulekile yokusondelana kwakhe ifaka umdlalo wokugeza wobaba nendodana.
Lapho eneminyaka engu-3, uDavvi Luca wayesetshenziselwe ukudubula ubaba wakhe owamfundisa. U-Neymar uthathe uqeqesho lukaDavid Luca ngesinyathelo ngokumbhalisa e-Barcelona football school FCB Escola ku-2017,
Iminyaka Yesitayela SeMohawk:
U-Neymar nguye oshiwo ukuthi ungumdlali wokuqala waseBrazil ukwenza isitayela sezinwele ze-Mohawk.
Isitayela se-Neymar Mohawl. Isikweletu Emikhandweni Yezinwele Zezimadoda
Njengamanje, cishe wonke umfana webhola webhola lebhola eBrazil wenza isitayela sokusika izinwele ukuze ikopishe iqhawe layo. Futhi, nguye oyedwa wokuqala weBrazil odlala ibhola elizovela ngaphambi kwe-Time Magazine yonke.
AbaseBrazil badumazeke kakhulu eNeymar ngalokho ababiza ngokuthi 'ukuhamba eshibhile kuya FC Barcelona '. Ngenxa yokudumeka kwakhe, udumo kanye ne-hypes evelele yendawo, uNeymar kanye neqembu lakhe bavumelana nje nge-57 million ye-Euro eyamthinta FC Barcelona. Lokhu kwabaningi kubonakala sengathi sekuphela ukudumazeka kokuxoxisana.
Kuchazwa Inkolo KaNeymar:
Umkristu weqiniso Futhi 100% kaJesu Kristu:
UNeymar uyikholwa likaJesu Kristu kusukela ebuntwaneni. Ngikuthanda kakhulu ukusebenzisa iBhana (100% Jesus).
Ngokuyinhloko, uNeymar ungumKristu weqiniso futhi owenzayo ngokholo. Ubona Ukuphila njengento engaba nengqondo kunoma yimuphi umuntu lapho ebeka uJesu Kristu kuqala ezintweni zonke. Bobabili UGabriyeli uJesu futhi Edinson Cavani babe noJesu ofanayo Uthanda indlela yokuphila njengoNeymar
INeymar Biography- Rise to Fame Indaba:
UNeymar waba omunye wabadlali bezemigwaqo beSao Paulo, eBrazil ngaphambi kokuzalwa kuka-11. Isitayela sakhe sokudlala saseBrazil samba esakhiwe futhi sokwemvelo senze ukuba kube yizinqumo ezithandwayo ngabahleli bebhola lomgwaqo abamenze waba yingxenye yemidlalo ebalulekile yomgwaqo.
Wathola ukujwayela okuvelele ogwini kanye nebhola lezinyawo zomgwaqo onzima ngenxa yezinyawo, amakhono okudonsa kanye nombono oncomekayo wezinyawo zakhe ezibuthakathaka ezishiyekile ukuze aguqe amabhola abe imigomo esuka kude. Lokhu kwabona uNeymar ethuthuka emdlalweni webhola lomgwaqo ukuze adlale ibhola emdlalweni.
U-Neymar wabe esebonwa futhi efunwa yi-scouts evela entshonalanga, i-Real Madrid phakathi kwamanye amakilabhu awayekwenqaba ukuze adlale eqenjini lakhe laseSantos lapho amathemba aphezulu khona. Ku-2011, wanikezwa indawo eqenjini likazwelonke laseBrazil ngu-Coach ngaleso sikhathi, u-Coach, uLuiz Felipe.
Ekugcineni wasayinwa yi-Barcelona FC ku-27th kaMeyi 2013 wezigidi eziyizigidi ezingu-57. Eminyakeni emine kamuva, wasayina i-PSG ngemali yokudlulisela irekhodi $ 263 million. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Siyabonga ngokufunda iNdaba yethu ye-Neymar Junior Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-neymar jr kumele ibuyele emuva noma i-real madrid en-2019 futhi kufanele ibukele i-ballon noma i-coupe du monde futhi ngiyayithanda futhi ngiyindodana yami futhi ngifuna ukushintsha le ncane
UJuan Bernat Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
U-Julian Draxler Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts